China Shuttle Carrier System rụpụta na Factory | Huade
Sistemụ ụgbọelu mgbagharị ahụ nwere ihe mkpuchi redio, ndị na-ebu ya, ndị na-ebuli elu, ndị na-ebugharị, racks, sistemụ njikwa yana usoro njikwa ụlọ nkwakọba ihe. Ọ bụ sistemụ arụmọrụ zuru oke maka nchekwa kpụ ọkụ n'ọnụ, usoro 24x7 na-agba ọsọ na-azọpụta ọtụtụ ọrụ ọrụ, yana usoro ịnyefe usoro nchekwa maka nnabata ụgbọ mmiri na-eme mgbanwe maka mmefu ego dị iche iche. Ejirila usoro a mee ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dịgasị iche iche nwere ntụkwasị obi na mgbanwe dị elu.
Kwadoro site na ndi na-eduzi trolley Igwe ọsọ ọsọ na akara mba ụwa
Ọrụ nkwụsi ike 24x7 na-enweghị enyemaka mmadụ Akpaaka ụgwọ-agbapụta n'ahụ
Teknụzụ njikwa ike Smart Na-ebugharị site na nnukwu capacitor na usoro nkwụghachi na-enweghị mmachi
Advanced-eji ire ụtọ shuttling technology
Enwere ike iji sistebul na-ebugharị maka ụlọ nkwakọba ihe chọrọ ebe nchekwa ọzọ, usoro a nwere ike iji ohere ahụ rụọ ọrụ kachasị elu site na iwepu wara wara maka forklift ma ọ bụ cranes stacker. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịrụ ọrụ dị elu karị, enwere ike itinyekwu ụgbọ mmiri na ndị na-ebu ya nakwa ndị na-ebuli elu iji mee ka arụmọrụ I / O
Utgbọ mmiri na-enyefe nhọrọ maka ndị na-eweta ihe ngwọta / ndị na - emekọrịta ihe, ọ nwere ike imeghari na FIFO na LIFO chọrọ ọrụ. A na-ejikwa ụgbọelu niile na-arụ ọrụ n'ụlọ nkwakọba ihe maka iji ohere na ịdị elu (na-arụ ọrụ na mbuli), yana nhazi I / O na-agbanwe.
Oke nke ụgbọelu​ (nna ukwu mgbagharị):
Transferdị Nyefee Ọkwa
Na-akwọ ụgbọala site na
Ibu Ibu ≤
Pallet Ogologo mm
Riergbọ ebutu ọsọ m / s≤
Onye na-ebu ụgbọ ọsọ zuru oke m / s ≤
Gbọ mmiri ebutuola ọsọ m / s ≤
Utgbọ mmiri zuru ezu ọsọ m / s ≤
All akụrụngwa a ga-anwale tupu n'ichepụta. All anyị racking na usoro, akpaaka usoro a ga-anwale tupu nnyefe. HUADE nwere otu ndị ọkachamara QC. Ha ga-enyocha ma nyochaa ngwaahịa niile. Anyị ga-enye mpempe akwụkwọ nyocha 100% site na mpempe ma ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ.
Nke gara aga: ASRS
Osote: Igwe eletriki igwe eletrik
-Zọ 4zọ 4-Way